U-Apple uza kuzisa isizukulwana esitsha se-iPhone kunye ne-Apple Watch ngoSeptemba 12 | I-Androidsis
Emva kweentsuku ezininzi zamarhe kunye nokuqagela, inkampani esekwe eCupertino isandula ukuthumela isimemo kumajelo eendaba esazisa ngomhla oza kubhiyozela ngawo ngokusesikweni umboniso wesizukulwana esitsha se-iPhone kunye neApple Watch. Isizukulwana esitsha se-IP Pro kunye nokuvuselelwa okulindelwe ixesha elide kweMacBook Air nazo zinokwaziswa.
Isibhengezo somsitho sikhatshwa kukuvuza okukhulu kwe imifanekiso esemthethweni apho sinokubona khona ii-Apple Watch ezintsha kunye neemodeli ezintsha ze-iPhone, imifuziselo yamagama angaqinisekiswanga, kodwa yonke into ibonisa ukuba iya kuba yi-iPhone XS kunye ne-iPhone XS Plus, eyokugqibela enobukhulu obukhulu bescreen.
Kumfanekiso ongentla, sinokubona iimodeli ezimbini eziza kuboniswa yiApple, imodeli ye-5,8-intshi, eya kuthi ibe lilandela le-X X yangoku kwaye izakubizwa ngokuba yi-iPhone XS, kunye enkulu, ebizwa ngokuba yi-iPhone XS Plus, ethi ingafika ngescreen se-intshi ye-6,5 inoyilo olufanayo. Kwakhona, ukuba sijonga emaphethelweni esixhobo, sinokubona ukuba njani umbala wegolide uya kuba lukhetho olutsha kuluhlu lwemibala yeemodeli ezintsha ze-iPhone zalo nyaka.
Umfanekiso osemthethweni ovezwe yi9to5Mac uqinisekisa amarhe apho kwathiwa isizukulwana sesine seApple Watch, siza kubona ukwanda kobukhulu besikrini nge-15%, ukugcina ubungakanani besixhobo, kodwa ukunciphisa isakhelo, ukuze uthathe ithuba kwizintambo zezizukulwana zangaphambili. Esi sizukulwana sitsha siza kuza nommandla omtsha oya kusivumela ukuba songeze inani elikhulu leengxaki, ukwenza ngokwezifiso ulwazi oluboniswe kwiscreen.
Umnyhadala uzakubanjelwa kumaziko amatsha eApple Park, ngakumbi kwiholo yaseSteve Jobs, kwaye izakuqala ngeye-10 kusasa ngexesha lendawo, nge-19 ngokuhlwa ngexesha leSpanish. Ukusuka kwi-Androidsis, siya kunika iakhawunti efanelekileyo ukubona ukuba yintoni ukubheja kuka-Apple kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Apple uza kuzisa isizukulwana esitsha se-iPhone kunye ne-Apple Watch ngo-Septemba 12